Barnaamijka meeleyntu waa taageero qaabkeedu yahay hawlo iyo waxbarasho oo loogu talogalay ajaanibka dalka ku cusub. Hadafkuna waa inaad sida ugu dhaqsaha badan ugu barato afka iswiidhishka oo aad shaqo ugu hesho oo adigu masruufkaaga u la soo baxdo.
Oo ku saabsan barnaamijka meeleynta
Waxaan filinkaan uga sheekeyneynnaa taagerada iyo caawimaadda aad heli karto iyo waxa adiga lagaaga baahan yahay si aad u bilowdo waxbarasho ama shaqo.
Waa maxay barnaamijka meelaynta?
Waa barnaamij ka kooban hawlo u habaysan shakhsiyan iyo taageero, taas oo lagu daray in adigu aad si fir-fircoon u raadsato shaqo. Hadafkuna waa inaad sida ugu dhaqsaha badan ugu barato afka iswiidhishka oo aad shaqo ugu hesho oo adigu masruufkaaga u la soo baxdo.
Yaa ka qayb qaadan kara barnaamijkan?
Waad ka qayb qaadan kartaa barnaamijkan haddii aad buuxisay 20 laakiin aanad ahayn 65 sano oo dhawaan heshay sharciga deganaansho ee qaxoonti ahaan, gabood u baahan ama qaraabo.
Tani ayaad samayn kartaa dhinaca barnaamijkan
Adiga iyo shaqaale Xafiiska Shaqada ah ayaa qorshaynaya nooca hawlaha adiga sida ugu fiican kugu haboon si aad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah aad u barato Iswiidhishka una hesho shaqo. Waa kuwan dhowr tusaale oo hawlahan ah:
waxbarasho luqadeed looguna talogalay adigaaga aan haysan aqoonta aasaasiga ah ee iswiidhishka, Iswiidhishka loogu talogalay ajaanibka (SFI)
waxbarashada maadooyinka cilmiga bulshada
waxbarasho heerar kala duwan ah, haddii aad u baahantahay inaad horumariso ama dhisto aqoontaada
tababarka goob shaqo
taageero marka aad raadsanayso shaqo
taageero iyo talo-bixin la siiyo adigaaga ka fikiraya inaad bilowdo shirkad gaar kuu ah
Marka aan kulanno ayaad nooga sheekeyneysaa waaya-aragnimadaada xirfadeed, waxbarashadaada, waxa aad xiisayso iyo hiyigaaga. Waxaa muhiim ah inaan ogaanno haddii ay jiraan wax lala xiriirin karo caawimaadkaaga ama xaaladdaada ijtimaaciga ah oo wax ka beddeli kara fursadda inaad ka qaybqaadato dhaqdhaqaaqyo ama shaqayso. Haddii aad leedahay baahi gaar ah waxaan isku dayeynnaa inaad barnaamijkaas ka dhigno mid kugu habboon. Marka taasi dhamaato ayaynu si wada-jir ah u dejinaynaa qorshahaaga. Adigu waxaad qorshahaaga ka arki kartaa moobilka oo waxaad haysataa taageerada oo dhan oo ku urursan hal meel. Waxaanu wakhtigan oo dhan la soconaynaa sida wax kuugu socdaan kuna siinaynaa taageerada aad u baahantahay.
Barnaamijkan caadiyan waa wakhti buuxa. Haddii aad ku jirto fasax waalidnimo wakhti kala bar ah, ama aanad shaqayn karin wakhti buuxa iyadoo ay sabab u tahay xanuun ama hoos u dhac awooda ah, waxaa jirta fursad ah in laga qayb qaato barnaamijkan wakhti kala bar ah.
In laga qayb qaato barnaamijkan dabcan maaha khasab, laakiin haddii aad ku jirto waa khasab inaad fir-fircoonaato oo raacdo qorshaha aynu ku heshiinay.
Adigaaga qaba xanuun ama hoos u dhac awooda ah waxaad heli kartaa taageero dheeraad ah
Haddii caafimaadkaaga ama hoos u dhaca awoodaadu ay raad ku yeelanayso awoodaada inaad ka qayb qaadato hawlahan waxaanu doonaynaa inaad sheegto arrintan. Waxaynu si wada-jir ah isula baareynaa nooca taageero ee adigu aad u baahantahay si aad u awoodo inaad uga mid ahaato hawlahan.
Haddii aad u baahantahay hawlo si shakhsiyan ah kugu haboon waxaad naga heli kartaa taageero. Waxaad heli kartaa qalab waxtar leh oo kaa caawiya shaqa-raadinta, iyo weliba caawimaada in xiriir lala yeesho shaqo-bixiyayaasha.
Waa kuwan tusaalaha dhowr xaaladood kuwaas oo raad ku yeelan kara awoodaada inaad shaqayso ama wax barato:
Haddii aad leedahay dhibaato araga ah, tusaale ahaan ay kugu adagtahay in aad meel dheer ka garato dadka ama akhrido qoraal yar.
Haddii aad qabto dhibaato maqalka, sida inaad maqasho waxa laga wadahadlayo ama ay sanqartu dhibeyso dhegahaaga.
Haddii aad tusaale ahaan la xanuunsan tahay culays xagga maskaxda, niyadjab, hurdaxumo, wax isku taxalujinta iyo xasuusta oo kugu adag ama waxfahamka oo kugu adag.
Haddii jirku ku xanuunayo, sida inay kugu adag tahay inaad fariisato, istaagto ama socoto ama inaad gacmaha isticmaasho.
Haddii qoyska dhibaato ka jirto, tusaale ahaan si xun u isticmaalka khamri ama maandooriye, qof ehel oo xanuunsan ama gacanqaad guriga ka dhaca.
Gunnooyinka iyo shuruudaha
Markii taageeradaan lagu siinayo waxaad ka qaybgalaysa barnaamij. Xaaladdaas waxaad gunnada ka dalban kartaa Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan]. Halkaan waxaad ka aqrisan kartaa warbixin dheeraad oo ku saabsan sida gunnada loo codsado, iyo shuruudaha u degsan ka qaybgelista barnaamijyada.
Markii aad ka qaybgalayso barnaamij
Waajibka waxbrasho – loogu talogalay adigaaga aan wakhti dheer wax soo baran
Haddii aanad soo dhigan wax iskuul ah, aad dhigatay oo keliya dugsiga hoose-dhexe ama aanad soo baran wax u dhigma dugsiga sare ee Iswiidhan waxaa ku khuseyn karta waajibka waxbarasho. Haddii aanu qiimeyno in sidaas arintaadu tahay waa inaad waxbarsho ka codsato waxbarashada dadka waaweyn ee degmadaada ama koorso lagu magacaabo koorsada guud lagana helo machadka dadka waaweyn.
Dheeraad ku saabsan waajibka waxbarasho
Haddii aad xanuunsato ama aad heysid carruur xanuunsaneysa
Haddii aad xanuunsato ama aad u baahantahay inaad guriga la joogtid caruur xanuusanaysa waa inaad nagu soo wargeliso arrintan.
Wargelinta maqnaanshaha marka aad xanuusanayso
Samee wargelinta maqnaanshaha ee daryeelka caruur xanuusanaysa (VAB)
Bil kasta waa inaad soo gudbisaa warbixinta hawlaha Tani muhiim ayay u tahay inaad hesho taageero sax ah dhinaca dariiqa shaqo ama waxbarasho iyo inaad magdhawgaaga ka hesho Qasnada Caymiska.
Maxaa dhaca marka aan anigu helo shaqo?
Haddii aad heshid shaqo waqti buuxa ah inta aad ka qeyb qaadaneysid barnaamijka Laqabsashada (etableringsprogrammet) waad joojineysaa barnaamijka.
Maxaa dhacaya haddii anigu aanan helin shaqo?
Haddii aadan weli wax shaqo ah aadan helin, barnaamijka la qabsiga/dejinta kadib, waxaa jira fursado dheeraad ah. Markaasi waxaad ka qayb qaadan kartaa tusaale ahaan damaanad qaadka shaqada iyo horumarka ama damaanad qaadka shaqada ee loogu talogalay dhalinyarada.
Damaanad qaadka shaqada iyo horumarka
Damaanad qaadka shaqo ee dhallinyarada
Wakhti intee leeg ayaan ka mid ahaan karaa barnaamijka barnaamijka meelaynta?
Waxaad ka mid ahaan kartaa barnaamijka meelaynta ilaa iyo inta adigu aad
billowdo shaqo waqti buuxa
galaysid fasax waalid oo wakhti buuxa ah
si buuxda u xanuunsaneysid in ka badan hal bil oo barnaamijkana aan la waafajin karin
Adigu waxaad ka mid ahaan kartaa barnaamijka meelaynta isu geyn 24 bilood. Ka fikir in keliya aad ka mid ahaan kartid barnaamijkan gudaha muddo ah 36 bilood, xisaabsan laga bilaabo wakhtigii aad markaasi heshay lambarkaaga shakhsiga.
Maxaa dhaca haddii aan noqdo qof xanuun ku qoran ama fasax waalidnimo?
Haddii aad xanuun ku jirto muddo dheer, waxaan isku dayaynaa inaanu si kastaba ha ahaatee qaybaha barnaamijkaas ku haboonaysiino si aad uga qayb qaadan karto. Adiga waa lagaa saarayaa barnaamijkan
haddii aad si buuxda u xanuunsaneysid in ka badan hal bil oo barnaamijkana aan la waafajin karin
haddii aad gasho fasax waalidnimo wakhti buuxa.
Adigu waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan mar kale, iyadoo ay shuruud u tahay in aanay ka soo wareegin wakhti ka dheer 36 bilood ka dib markii aad heshay lambarkaaga shakhsiga ah.
Caymis ma ku jiraa?
Waxaa ku daboolaya caymiska dhaawaca qofka iyo nolosha marka aad ka qayb qaadato barnaamijka meelaynta. Shaqo bixiyuhu dhaqaale ayuu ka heli karaa dowladda haddii ay dhacdaba in wax yaala shirkada aad wax waxyeelo gaarsiiso.
Miyaan waayi karaa booskayga barnaamijkan?
Booskaaga waad waayi kartaa haddii aadan hawshaada ka soo bixin ama aad meesha laguu diro qaseysid. Waxaad sidoo kale lumin kartaa booskaaga haddii ay isbedelaan xaaladahaaga sharciga degganaanshaha iyo haddii aadan ka tirsaneyn dadka khuseeya barnaamijkan.
Miyaan dib ugu soo noqon karaa barnaamijkan haddii aan shaqo helo.
Waxaad dib ugu soo noqon kartaa barnaamijka haddii aad shaqeysay, iyada oo ay ku xiran tahay in aysan ka badnayn 36 bilood markii aad heshay lambarkaaga amniga bulshada.
Adigu waad heli kartaa kaalmada dhinaca kharashyada safarka
Haddii aad ka qayb qaadato barnaamij ama baaritaan ka dhacaya meel kale oo aan ahayn halka aad ku degantahay waad heli kartaa kaalmada kharashyada safarka iyo hoyga.
Kaalmada kharashyada ee xilliga barnaamij ama wareysi shaqo